LGBTQ IziBonelelo zoMsebenzi oBuchule- OutBüro
Indawo ekuGqibela ngayo yoPhuculo loMsebenzi LGBTQ + Iingcali
I-OutBüro inebhongo lokubonelela ngamathuba okuqhubela phambili nomsebenzi kuthi sonke LGBTQ amalungu kunye namahlakani. Siyaqonda ukuba ukubonelela ngezixhobo zomsebenzi kubaluleke kakhulu kuwo onke amabakala ekhondo lomsebenzi. I-Portal yoCwangciso loMsebenzi kwi-OutBüro yindawo yokwenyani yokucwangcisa ikhondo apho unoku:
Cwangcisa kwaye uphande ngalo lonke ikhondo lomsebenzi - ukusuka kumfundi ukuya kumhlala phantsi.
Fumanisa izixhobo zokukunceda ufumane imisebenzi oyifunayo.
Fumana umsebenzi olandelayo.
Nxibelelana nabaqeshi, abacebisi, kunye namathuba okufunda okuqhubela phambili nomsebenzi wakho.
Qiniseka ukuba ujoyina i-Out: Iqela lemisebenzi elinomxholo ongaphezulu, yabelana ngezinto ozifumanayo kwi-intanethi, uzibandakanya nabanye, fumana inkxaso kunye nokuxhasa abanye. Khangela onke amaqela ngendawo kunye namaqela ajolise kwimixholo anomdla.
Iqela lemisebenzi engaphandle
Nxibelelana nokuqesha abaphathi
Common Iibhodi zomsebenzi, ezinje ngeNene, iLinkedIn, neMonster ziindawo zemisebenzi ngokubanzi eziphosa umnatha obanzi- kubafuna umsebenzi nabaqeshi. Kodwa njengentlangano ejolise kuwe-i LGBTQ + yoluntu, sikunika uluhlu oluqwalaselweyo lwamathuba emisebenzi. Sikwanikezela Abaqeshi abanomjelo womgangatho ofanelekileyo LGBTQ abaviwa abanakubafumana kwenye indawo.
On I-OutBüro uya kuba ne-intanethi enkulu amava, apho unga:
Khangela imisebenzi ngokulula kwi-laptop yakho, ithebhulethi, okanye isixhobo esiphathwayo.
Yenza izilumkiso zomsebenzi ngqo kwi-imeyile yakho ngokusekwe kuphando lwakho.
Iingcebiso ezenzelwe wena ezisekelwe kuphendlo lwakho oludlulileyo.
Layisha kwakhona i-resume yakho ukuze idluliswe ngokuzenzekelayo. Ungahlala ungaziwa kwaye ulawule ngubani onokufikelela ukujonga ulwazi lwakho.
Ukufikelela kulwazi lomsebenzi
Gumba ngokunzulu ukuze uqonde ngakumbi malunga nendlela oyikhethileyo ngaphakathi kubugcisa nakwishishini. Kwi-OutBüro ungafikelela kwidatha malunga nomsebenzi wakho wangoku kunye nonokubakho kwaye ufumane ukuqonda okufunekayo ukuze uqhubele phambili okanye utshintshe indlela.
Nalu ulwazi oluphambili lomsebenzi onokulufumana kwi-OutBüro's LGBTQ + iziko lomsebenzi.
Ukuqonda ngaphezulu kwemisebenzi engama-1000
Izibalo zamanqanaba emfundo aqhelekileyo abantu kwindima
Imisebenzi eqhelekileyo eyenziweyo
Ukuthelekiswa kweenkcukacha-manani zengqesho kusetyenziswa i-avareji yendawo, urhulumente, kunye nelizwe
Iividiyo "Usuku ebomini"
Imisebenzi enxulumene noko
Ukubonelela ngolu hlobo lolwazi kukunceda uqonde:
Apho ukhoyo kwikhondo lakho lomsebenzi xa kuthelekiswa nokukhula okucingelweyo
Ngawaphi amathuba akhona ngokujikeleza ikhondo lomsebenzi othile
Yeyiphi imisebenzi ehambelana nayo inokuba ngamanyathelo alandelayo kwikhondo lomsebenzi wakho
Ukuqwalaselwa okunxulumene nomsebenzi onokubakho okanye ukuhambisa indawo
Isixhobo seNdlela yokuKhetha
Yenza imephu ecacileyo yokufikelela iinjongo zakho zobungcali.
Isixhobo se-OutBüro sokukhangela ikhondo sikubonisa ukuba ungafika njani kule ndawo ukuyo namhlanje, ukuya apho ufuna ukuba khona kwikamva lakho lomsebenzi.
ukuzithemba Cwangcisa inyathelo elilandelayo kwikhondo lakho lomsebenzi ngesiqinisekiso sokuba liya kukunceda ufikelele kwezona njongo zakho ziphambili zomsebenzi.
Isicwangciso sokusebenza somntu -Ungayila ezakho, izicwangciso zomsebenzi ezizezakho, kubandakanya ukufunda, uqeqesho kunye namava afunekayo ukufikelela kwiinjongo zakho zemisebenzi oyifunayo.
Ukuzihlalutya ngokwakho Sebenzisa inkcazo yendima nganye kwikhondo lomsebenzi wakho kunye noluhlu lwezakhono eziphambili ezifunekayo ukuze uphumelele kwindima nganye, ungavavanya izakhono zakho apha endleleni, kwaye ubone ukuba yeyiphi imfundo yobungcali kunye namava ekufuneka uqhubele phambili.
I-OutBüro ibonelela ngezixhobo kunye nezixhobo, ezenza ukuba ibe yeyona ndawo iphambili yokuphuhla ikhondo lomsebenzi LGBTQ + iingcali kuwo onke amanqanaba okukhula komsebenzi. Thatha inyathelo elilandelayo kuphando, ucwangcise, kunye nomsebenzi wephupha lakho. Kuluntu lwase-OutBüro, unokungaziwa, ke indawo yomsebenzi efuna ubhaliso olwahlukileyo kunye nokungena.
Qalisa ukukhangela kwakho umsebenzi namhlanje
Iindidi zomxholo Khetha Udidi